आर्थिक अभियान:फोटो फिचर
दिनमा १५/२० ओटा चस्मा बेच्ने पसलेलाई एकै जनाले बालेनवाला २५ चस्मा मागेपछि...
जेठ ४, काठमाडौं । न्यूरोड मखनस्थित सुरज आर्केडका एक चस्मा व्यवसायी दिनभरीमा बालेनवाला २० ओटा चस्मा मात्रै बेच्थे । १५ देखि २० ओटा चस्मा बेच्दा राम्रो व्यापार भयो भन्दै आनन्दको सास फेर्ने उनलाई एक दिन एउटै व्यक्तिले २५ ओटा चस्मा मागे । उनी दंग परे । हिजोआज उनको व्यस्तता धेरै नै बढीसकेको छ ।...
फोटो फिचर: स्थानीय चुनावपछि पुरानै लयमा फर्किंदै शहर
स्थानीय चुनावको कारण सुनसान बनेको काठमाडौं शहरमा पुनः लयमा फर्केको छ । चोक बजार र गल्लीहरुमा चहलपहल बढेको छ । सरकारी कार्यालयहरु खुले सँगै सेवाग्राहिहरुको भीड लागेको छ । चुनावको लागि खटिएका कर्मचारी फर्किने क्रम पनि जारी रहेको छ । बैंकहरु ,बन्द रहेका विद्यालयहहरु पनि मंगलव...
विजयी र्‍यालीभन्दा कम छैन राष्ट्रिय सभागृहमा बालेन समर्थकको क्रेज : फोटो फिचर
जेठ ३, काठमाडौं । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको मतगणना चलिरहेको छ । महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र साहले शुरुदेखि नै अग्रता कायम गरेका छन् । आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीभन्दा ६ हजार बढी मत ल्याएर अग्रस्थानमा रहेका बालेनको समर्थनमा सर्वसाधारण युवाहरू दिनद...
यसरी मनाइयो बुद्ध जयन्ती : फोटो फिचर
आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएर पूजाअर्चना गरेर फर्केका छन् । काठमाडौंको स्वयम्भू, बौद्ध लगायतका बौद्धपिठहरूमा पनि बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ । फोटो : सुनिल शर्मा...
पर्यटकलाई फोहोर उपहार ! नाक थुनेर घुम्दै विदेशी पाहुना : फोटो फिचर
काठमाडौं उपत्यकाको फहोर नउठेको हप्तौ भइसक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सडकमा थुप्रीएको फोहोर उठाउने तत्परता कसैले देखाएनन् । अहिले काठमाडौंमा जताततै फहोर थुप्रीएको छ । सर्वसाधारण देखि विदेशी पर्यटकसम्म नाक थुनेर हिड्ने अवस्था आएको छ । फोटो : सुनिल शर्मा/आर्थिक अभियान
तस्वीर : मुसलधारे पानीमा रुझेरै बालेनको समर्थनमा उत्रिएका सुभेच्छुकहरू
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र साहको समर्थनमा मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृह पुगेका समर्थकहरू पानी परेपछि रुझेका छन् । शुक्रवार सम्मपन्न स्थानीय तहको चुनावको मतगणना शनिवारदेखि शुरु गरिएको थियो । बालेेन साहले शुरुदेखि नै अग्रता लिइरहेका छन् । उनको निकटम प्रतिस्पर...
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बिनीमा यसरी गरे पूजाआर्चना (फोटो फिचर)
जेठ २, लुम्बिनी । लुम्बिनी भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी धर्मपत्नी डा आरजु राणा देउवाले पनि पूजाअर्चना गरे । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले पूजाअर्चना ग...
काठमाडौं महानगरको मतगणना स्थल बाहिरको दृश्य : जसलाई भोटको होइन नोटको चिन्ता छ (फोटो फिचर)
जेठ १, काठमाडौं । अहिले देशभर शुक्रवार सम्पन्न स्थानीय चुनावको मतगणना चलिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना राष्ट्रिय सभागृहमा चलिरहेको । लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहका कारण काठमाडौंको मतगणना झनै चासो बढेको छ । सभागृह भित्र मतपरिणाम सार्वजनिक गर्दा...
तस्वीर : काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा खटिएका म्यादी प्रहरी
काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा खटिएका म्यादी प्रहरी । महानगरमा अहिले वडा नम्बर १,२,३,४ र ३२ को मतगणना भइरहेको छ । जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहले अग्रता लिएका छन् । तस्वीर : सुनिल शर्मा/आर्थिक अभियान
तस्वीर : शुरुवाती अग्रता लिएपनि खुशी छैनन् बालेन शाह !
वैशाख ३१, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार बालेन शाहले शुरुवाती अग्रता लिएपनि उनी खुशी देखिएका छैनन् । मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट आफ्ना शुभचिन्तकसँग कुरा गरिरहेका बालेनले चस्मा समेत लगाएका छैनन् । पहिलो १०० मत गन्दा शाहले २२ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनकी निकटतम प्रतिद्व...